Kooxda Al-Ahly Masar ayaa ku guuleysatay koobka Champions League Afrika oo ay isku… – Hagaag.com
Posted on 28 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda Al-Ahly ayaa ku guuleysatay derbiga Masar ee finalka Champions League ee Afrika, waxayna ku guuleysatay horyaalkii sagaalaad ee taariikhdeeda ka dib markii ay 2-1 kaga badiyeen kooxda xafiiltamaan ee Zamalek.
Si kastaba ha noqotee, fursadaha ugu halista badnaa waxay ahaayeen Al-Ahly oo darbada Hussein Al-Shahat ay ku dhacday birta bidix ee goolhayaha Zamalek daqiiqadii 54aad, Axmed Sayed Zizou ayaa ka jawaab celiyay daqiiqadii 65aad kubad iyaduna ku dhacday birta midig ee goolhayaha Al-Ahly Mohamed El-Shennawi.
Labada koox ayaa isweydaarsaday xakameynta daqiiqadaha ka harsan ciyaarta kahor inta uusan Mohamed Magdy Afsha u horseedin goolka guusha daqiiqadii 86-aad.
Tartanka ciyaarahan ayaa bilowday bishii August 2019, waxaana lagu waday in la soo gebagebeeyo bishii May 29da ee la soo dhaafay, ka hor inta aan la go’aansan in dib loo dhigo howlaha ciyaaraha in ka badan hal jeer sababo la xiriira saameynta virus-ka Corona.
Tan iyo bilowgii noocii ugu horreyay ee Champions League 1964, ma lagu arkin weligiis final laba koox oo ka socda hal dal, laakiin Al-Ahly iyo Zamalek ayaa ugu dambeyn awooday inay gaaraan guushaan taariikhiga ah, iyaga oo xaqiijiyay hoggaankooda kubadda cagta ee Afrika.
Maanta, kubada cagta Masar waxay hanatay koobkeedii shan iyo tobnaad ee koobabka ugu quruxda iyo qiimaha badan ee Afrika, si ay u xoojiyaan kaalinta ugu sareysa ee liiska wadamada ugu badan ee heysta Champions League, iyadoo xusid mudan in ciyaartii maanta ay goobjoog ka ahaayeen qeyb ka mid ah kooxaha Masar ee finalka markii 23aad taariikhda tartanka.
Kubada cagta carabta ayaa hanatay horyaalkeedii 32-aad ee taariikhda tartankan, iyo kii afaraad oo xiriir ah, kadib markii kooxda Wydad Casablanca ee reer Morocco ay koobka ku guuleysatay sanadkii 2017 iyo kooxda Taraji Tunisia ee 2018 iyo 2019.